Isika mianakavy ihany! | NewsMada
Isika mianakavy ihany!
Mikija ary saika manorana ny andro manerana ny faritra maro. Vokany, miakatra ny rano, mihotsaka ny tany sy ireo vatobe isan-karazany. Betsaka noho izany ireo lalam-pirenena no tapaka ka mihitsoka tsy tafavoaka ny vokatra.
Manahy sahady ny mety ho fanararaotan’ny sasany, hampiakatra vidin’entana maro, izay azo antoka fa tsy maintsy ataon’izy ireo ho anton’izany ny fahasarotan’ny lalana hitaterana sy hamoahana ny vokatra.
Mety hisy lafiny kely marina ihany izany, saingy ireo mpanararaotra no tena betsaka sy mitady hanan-karena tampoka. Eo indrindra no hanaovana antso amin’ny fitondram-panjakana, mba hidina sy hanao fitsirihana eny an-tsena rehetra eny, satria dia betsaka ireo mpivarotra ambongadiny no manitrika sy manafina ny entana, ka rehefa vitsy sy tsy misy intsony izany vao mamoaka ny ambim-bava ao aminy izy ireo.
Noho ny filàna sy ny tahotra mety tsy hahazo, tsy manam-pidiny ireo mpanjifa na dia miakatra avo roa heny aza ny vidin’entana, fa tsy maintsy mividy foana. Ny tena loza aza, mipoitra ny varo-maizina any anelakela-trano rehetra any, tsy vitan’ny hoe lafo vidy fa mbola tsy azo antoka ihany koa na ny kalitao na ny lafiny ara-pahasalamana.
Raha sanatria marary eo, tsy maintsy hihazakazaka hamonjy dokotera na toeram-pitsaboana ka sady ho lany vola no lany fotoana, kanefa mbola hitaintaina amin’ny aretina. Dia inona moa izany fa tsy isika mianakavy ihany no fototra sy mahatonga izany rehetra izany?
Tena mila fahatongavan-tsaina sy fiovana fomba fiainana amin’izay kosa angamba, fa efa vaovao ny taona. Mila mandray lesona tamin’izay fomba ratsy tsy nampandroso hatramin’izay, ka mba tsy hisonanika hiaina fiadanana fotsiny amin’ny alahelo sy ny fanararaotana ny hafa intsony, manomboka izao. Hanampy sy hanamaivana ireo mpiara-belona hiala amin’ny fahasahiranana mianjady amin’izy ireny aza no tokony himasoana sy hilofosana satria dia isika mianakavy ihany no hiaraka hiaina sy hivelona mandrakizay eto amin’ity firenena malalantsika ity.